အကွှေးလေးနဲ့ ထိုငျးသှားမိပါတယျ ရုပျအလောငျးအဖွဈနဲ့ ပွနျလာခဲ့ရတဲ့ မွနျမာလုပျသားတဈဦးရဲ့ ကွကှေဲဖှယျ ဖွဈရပျ - khitalinmedia
October 13, 2019 Khitalin Media သတင်း 0
ထိုငျးရောကျတာ (1)နှဈမပွညျ့သေးဘူးတဲ့ ကနျြရဈသူဇနီးကပွောတယျ။ အခုလမှ တကျလာရတဲ့ ကုနျကစြရိတျလေးခုမိတုံး အမြိုးသားကသဆေုံးသှားတော့ ကြှနျမတို့မိသားစု ဘယျလိုရပျတညျရမလဲ?
ကြောငျးသားတှလေဲ ပညာရေးက မပွီးဆုံးသေးဘူး။ အခု စာမေးပှဲအခြိနျဆိုတော့ ကလေးတှေ အသိမပေးရသေးဘူး။ လုပျငနျးခှငျထဲမှာ သတိကွီးကွီးနဲ့ လုပျကွပါ။
လမျးဘေးမှာ လုပျနရေတာ အခြိနျရှိသလောကျ ဝဏ်ဏတှေ ဖိုမငျတှကွေောကျရ ထိုငျးစကားနားမလညျတာက တဈပိုငျး အလုပျပွီးလို့ အခနျး ပွနျရောကျမှစိတျအေးရတယျ။
အရမျးအန်တာရာယျမြားတယျ။ အတူတူလုပျနကွေတဲ့ အလုပျသမားတှေ ကြှနျမတို့မိသားစုဘဝမြိုး မဖွဈရအောငျ ဆုတောငျးပေးနမေယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ လမျးတံတားအလုပျတှမှော မလုပျကွပါနဲ့ အခုလိုဖွဈသှားတော့ ဘာတခုမှ ယူသှားမရဘူး။ ကိုယျ့မိသားစုတှနေဲ့ ပြျောပြျောပါးပါးနခှေငျ့မရခဲ့ဘူး။
ကိုယျ့နိုငျငံမှာ အလုပျအကိုငျမရှိလို့ MoU နဲ့လာလုပျရငျ ရှာမှာနဲ့သာမယျဆိုတဲ့ အသိတခုကွောငျ့ လာခဲ့ပမေဲ့ လာတုံးကနှဈယောကျပွနျတော့ ကြှနျမတယောကျထဲပွနျရတော့မယျ ဝမျးနညျးမိတယျ။ ကြှနျမလိုအခွားလုပျသားတှေ မဖွဈပါစနေဲ့
ကိုယျရှာကိုယျပွနျစခေငျြတယျ။ ကံကုနျလို့သရေငျလဲ ကိုယျ့ရှာကိုယျ့ဒသေဆိုတော့ မိသားစုတှနေဲ့ ဖွလေို့ရသေးတယျ။ အခုတော့ သူစကားလဲကိုယျမသိ ကိုယျ့စကားသူနားမလညျတော့ အခကျအခဲတှေ စိတျမကောငျးစရာတှအေမြားကွီးပေါ့လို့ သဆေုံးသူရဲ့ဇနီးက ပွောတဲ့အသံလေး ကိုးကားရေးတငျပေးလိုကျပါတယျ။
AAC မဟာမိတျအဖှဲ့ ဒါရိုကျတာ ခိုငျကွီး
ဘ၀တွေခါးလို့ အကြွေးလေးနဲ့ ထိုင်းသွားမိပါတယ် အကြွေးမကြေပဲ ရုပ်အလောင်းသာ ပြန်လာတဲ့ မြန်မာလုပ်သားရဲ့ ဇနီးပြောပြတဲ့ ဘ၀ဆိုး
ထိုင်းရောက်တာ (1)နှစ်မပြည့်သေးဘူးတဲ့ ကျန်ရစ်သူဇနီးကပြောတယ်။ အခုလမှ တက်လာရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်လေးခုမိတုံး အမျိုးသားကသေဆုံးသွားတော့ ကျွန်မတို့မိသားစု ဘယ်လိုရပ်တည်ရမလဲ?
ကျောင်းသားတွေလဲ ပညာ​ရေးက မပြီးဆုံးသေးဘူး။ အခု စာမေးပွဲအချိန်ဆိုတော့ ကလေးတွေ အသိမပေးရသေးဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ သတိကြီးကြီးနဲ့ လုပ်ကြပါ။
လမ်းဘေးမှာ လုပ်နေရတာ အချိန်ရှိသလောက် ဝဏ္ဏတွေ ဖိုမင်တွေကြောက်ရ ထိုင်းစကားနားမလည်တာက တစ်ပိုင်း အလုပ်ပြီးလို့ အခန်း ပြန်ရောက်မှစိတ်အေးရတယ်။
အရမ်းအန္တာရာယ်များတယ်။ အတူတူလုပ်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ကျွန်မတို့မိသားစုဘဝမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဆုတောင်း​ပေးနေမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် လမ်းတံတားအလုပ်တွေမှာ မလုပ်ကြပါနဲ့ အခုလိုဖြစ်သွားတော့ ဘာတခုမှ ယူသွားမရဘူး။ ကိုယ့်မိသားစုတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးနေခွင့်မရခဲ့ဘူး။
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင်မရှိလို့ MoU နဲ့လာလုပ်ရင် ရွာမှာနဲ့သာမယ်ဆိုတဲ့ အသိတခုကြောင့် လာခဲ့ပေမဲ့ လာတုံးကနှစ်ယောက်ပြန်တော့ ကျွန်မတယောက်ထဲပြန်ရတော့မယ် ဝမ်းနည်းမိတယ်။ ကျွန်မလိုအခြားလုပ်သားတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့
ကိုယ်ရွာကိုယ်ပြန်စေချင်တယ်။ ကံကုန်လို့သေရင်လဲ ကိုယ့်ရွာကိုယ့်ဒေသဆိုတော့ မိသားစုတွေနဲ့ ဖြေလို့ရသေးတယ်။ အခုတော့ သူစကားလဲကိုယ်မသိ ကိုယ့်စကားသူနားမလည်တော့ အခက်အခဲတွေ စိတ်မကောင်းစရာတွေအများကြီးပေါ့လို့ သေဆုံးသူရဲ့ဇနီးက ပြောတဲ့အသံလေး ကိုးကားရေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ခိုင်ကြီး
မိနျးမ နားမကောငျးတော့သဖွငျ့ မိသားစုဆရာဝနျနဲ တိုငျပငျကွညျ့လိုကျသောအခါ …..